Somaliland oo xukuntay xubin mucaarad ah xili laga dayrinayo xorriyada hadalka
Somaliland oo lix bilood oo xabsi ah ku xukuntay xubin mucaarad ah
Maxamed Sidiiq Dhamme, gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Waddani | Xuquuqda Sawirka: Online
HARGEYSA, Somaliland – Xili xaaladda xorriyadda hadalka Somaliland aad loo saluug-san yahay ayaa maxkamada ku taala Hargeysa waxay maanta oo Khamiis ah ay lix bilood oo xarig garka u gelisay siyaasi da'yar.
Maxamed Sidiiq Dhamme oo muddo laba bilood ah xabsi ku jiray intii ay socotay dacwadiisa ayaa wuxuu haatan yahay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xabsiga mucaaradka ah ee Waddani.
Sarkaalkan ayay xeer-ilaalintu kusoo oogtay lagu laba dacwadood oo kala ah; kicin dadweyne iyo caay ka dhan ah madaxweynaha Somaliland.
Xeer-beegtada kiiskan gacanta ku haysay ayay saxaafadda maxaliga ah kasoo xigatay in Dhamme lagu helay dambi ah aflagaado ka dhan ah Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha maamulka gooni isu taaga ah.
Dhamme ayaa baraha bulshadda ku cabiri jiray aragtidiisa ku aadan siyaasada xukuumadda ee Sanaag – gobol ay isku haystaan Somaliland iyo Puntland - taasi maqaar-xanuunjisay maamulka Hargeysa.
Xisbiga uu ka tirsan yahay oo ka hadlay xukunkan ayaa cambaareeyay, waxana uuna cadaalo darro ku tilmaamay xukunkaasi xili wararku ay tibaaxayaan in xisbiga uu isku dayo in uu dammaanad kusii daayo Dhamme.
Xukunkan ayaa wuxuu noqonayaa kuwa sil-silad ah oo tan iyo markii uu timid xukuumada Muuse Biixi ay ku beegsaneyso shaqsiyaadka ka aragtida duwan ee baraha bulshadda ku muujiya fekerkooda.
Bahda warbaahinta ayaa qeyb ka ah dhibaneyaasha siyaasada cusub ee ka dhanka ah xorriyada hadalka iyadda oo horaantii bishaan June hawada laga saarey muuqaal-baahiyeyaal xaalada gobolkaasi diirada saaray.
Hay’addaha u dooda xuquuqda aadanaha oo walwal weyn ka muujiyey xaalada xorriyadda hadalka ee Somaliland ayaa ku tartarsiiyey hogaanka in uu aqbalo dhaliilaha isla markaana xaq-dhowro muujinta oraahda.
Waddani oo ka baxay heshiiskii xisbiyadda Somaliland ee doorashada
Somaliland 18.08.2019. 14:17
Talaabadan ayaa waxaa lagu sheegayaa in ay tahay mid abuureysa dib u dhac horleh.
​Khilaafkii Gollaha Wakiiladda Somaliland oo la xaliyey [Daawo]
Somaliland 26.08.2017. 19:59
Somaliland 25.08.2019. 16:05
Ergayga cusub ee Qaramada Midoobay oo ka degay Hargeysa
Somaliland 28.07.2019. 11:19
Xariga Xildhibaan oo sii kala fogeeyay hay’addaha dowliga ee Somaliland
Somaliland 13.05.2019. 09:39